Ngabaphi abantu abadumileyo abali-10 abazalelwa phantsi kweGemini? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ngabaphi abantu abadumileyo abali-10 abazalelwa phantsi kweGemini?
Aba bantu bomthonyama bancokola, banobudlelwane kwaye bahlakaniphile ngabadumileyo bakho abathandayo abazalwa phantsi kwalo mqondiso? Fumana ukuba ngoobani abantu abadumileyo beGemini obathandayo!
Abantu abazalwa phakathi kukaMeyi 21st - Juni 20th bangabemi bophawu lweGemini kwaye baziwa ngokuba yincoko, banobudlelwane, abakrelekrele kunye noxanduva. Ngokuqinisekileyo ngamalovane abakwaziyo ukuziqhelanisa nazo zonke iimeko, kwaye, ngenxa yomdla wabo wendalo kunye noburharha, awusokuze ube nesithukuthezi ngakubo. Uya kubethwa ngumoya xa ufumanisa ukuba ngabaphi abantu abadumileyo abazalwa phantsi kolu phawu. Ngubani owaziyo, mhlawumbi wabelana ngeempawu ezifanayo nesithixo sakho esidumileyo saseHollywood? Okanye, ngenye indlela, mhlawumbi i-charisma yakho yendalo iya kukubona ujoyina iinkwenkwezi kwi-Oscars elandelayo.
Abantu abaninzi abadumileyo bayakuthanda ukunconywa kwaye kusembindini wengqwalasela eziziimpawu eziqhelekileyo Gemini . Iimpawu eziphambili ezibalaseleyo zalo mqondiso ziquka ukuba unobuhlobo, uyathetha kwaye unomdla, nto leyo echaza ukuba kutheni kukho iiGemini ezininzi ezidumileyo. Fumana yeyiphi imiqondiso yezodiac enento efunekayo ukuze ube nodumo .
Ngoobani abadumileyo beGemini?
Masijongane nayo, ihlabathi lale nkulungwane yamashumi amabini ananye lilawulwa ziindaba zabantu abadumileyo, ukusuka kwiziqwengana esizifunda kwiimagazini, kumajelo kamabonakude nakwi-Instagram. Zange sibe saxesheni kakhulu malunga nobuso esibathandayo abadumileyo vuka yonke imihla. Thatha inyathelo kufutshane nezithixo zakho kwaye ufunde ngakumbi ngazo apha.
- Kutheni ungakhe ujonge Ukuhambelana kweGemini . -
U-Angelina Jolie: Wazalwa nge-4 kaJuni ngo-1975
U-Angelina Jolie ngumdlali weqonga waseMelika, umenzi wefilimu, kunye nomlweli wobuntu. U-Angelina Jolie ufumene i-Academy Award, i-Screen Actors Guild Awards ezimbini, kunye ne-Golden Globe Awards ezintathu, kunye uye waqanjwa njengomdlali weqonga ohlawulwa kakhulu waseHollywood. UJolie wazalelwa kwintsapho yabadlali kwaye waqala ukusebenza kunye noyise uJon Voight. U-Angelina Jolie wade watshata nenkanyezi yefilimu ephumelele kakhulu uBrad Pitt.
2) UJohnny Depp
UJohnny Depp wazalwa nge-9 kaJuni ngo-1963
UJohn Christopher Depp II ngumdlali weqonga waseMelika, umvelisi kunye nemvumi. Kuwo wonke umsebenzi wakhe uye wonyulwa kwi-Academy Awards ezi-3 kwaye uphumelele iMbasa yeGolden Globe kunye ne-Screen Actors Guild Award for Best Actor. Wenyuka waduma kumdlalo kamabonwakude we-1980s 21 Jump Street kwaye ngoko nangoko waba sisithixo esikwishumi elivisayo. Namhlanje, iDepp ithathwa njengenye yezona nkwenkwezi zihamba phambili emhlabeni.
3) UMarilyn Monroe
UMarilyn Monroe wazalwa ngomhla woku-1 kuJuni ngo-1962
UMarilyn Monroe wayengumdlali weqonga waseMelika, imodeli kunye nemvumi. UMarilyn Monroe waba lolona phawu ludumileyo lwezesondo lweminyaka yee-1950 kwaye lwaluyimbonakaliso yesimo sengqondo sexesha malunga nesondo. Nasemva kokusweleka kwakhe, uMarilyn useyenye yezona zinto zidumileyo zenkcubeko.
4) UJohn F. Kennedy
UJohn F. Kennedy - Wazalwa ngoMeyi 29th 1917
UJohn Fitzgerald 'Jack' Kennedy wayedla ngokubizwa ngokuba yi-JFK, yayiyi- Umongameli waseMelika owaba nguMongameli wama-35 wase-United States ngo-1961 de wabulawa ngoNovemba 1963. UJFK wasebenza njengoMongameli weDemokhrasi ngexesha leMfazwe yeCold, kwaye inxalenye enkulu yobongameli bakhe yayigxile ekulawuleni ubudlelwane base-US kunye neSoviet Union.
5) uNahomi Campbell
UNoami Campbell wazalwa ngomhla wama-22 kuCanzibe ngo-1970
UNaomi Campbell ngumzekelo waseBritane, umlingisi kunye nemvumi. UNahomi wajongwa njengemodeli ephezulu yexesha elizayo eneminyaka eyi-15, kwaye wazimisa njengomnye weyona modeli mithathu iphambili iphumeleleyo ngeminyaka yoo-1980 noo-1990. Kunye nakwikhondo lakhe lokumodela, uNahomi ukwanike ishishini lomculo ithuba kwaye wakhupha ingoma eyodwa yeRnB!
Kanye West - Wazalwa ngomhla wesi-8 kuJuni ngo-1977
Kanye West yimvumi yaseMelika, umbhali weengoma, umvelisi kunye nomyili wefashoni. U-Kanye waqala ukuvelisa abanye abaculi ababandakanya u-Alicia Keys kunye no-Jay-Z kwaye emva koko wagqiba ekubeni ahambe yedwa kwi-2001. Iimbono ezicacileyo ze-West zimenza aqaphele apho aya khona kwaye uye wabethwa ngeengxabano ezininzi kulo lonke umsebenzi wakhe; akakho umntu onokuthi uyadika!
7) UMary-Kate kunye no-Ashley Olsen
UMary-Kate kunye no-Ashley Olsen - Wazalelwa ngoJuni 13th ngo-1986
UMary-Kate Olsen kunye no-Ashley Olsen, owaziwa ngokuba ngamawele akwa-Olsen, ngabayili befashoni baseMelika kunye nabadlali beqonga. Amawele aqala eneminyaka emithandathu kwaye bafumana impumelelo encinci kwesikrini kude kube yiminyaka yabo yeshumi elivisayo. Kule mihla amawele omabini ngabayili befashoni abaphumeleleyo kwaye banomgca wempahla odumileyo.
UClint Eastwood - Wazalwa nge-31 kaMeyi ngo-1930
UClinton Eastwood ngumdlali weqonga waseMelika, umenzi wefilimu kunye nemvumi. I-Eastwood yaqala yavela kuthotho lweTV yaseNtshona kwaye yakhawuleza yaphakama yaya kudumo lwamazwe ngamazwe ngenxa yefilimu ethi 'Umntu ongenagama'. Kuwo wonke umsebenzi wakhe, uye waba inconyiwe njengoyena mlawuli ubalaseleyo kunye nomdlali obalaseleyo. UyiGemini enye enetalente!
U-Liam Neeson - Wazalwa nge-7 kaJuni ngo-1952
U-Liam John Neeson ngumdlali weqonga osuka kuMntla Ireland. U-Liam Neeson wavuka waya empumelelweni xa wayedlala kwifilimu kaSteven Spielberg uLuhlu lukaSchindler kwaye kutshanje kwiifilimu eziThathiweyo. Kuyo yonke imisebenzi yakhe uye wachongwa kwiimbasa ezininzi kuquka nomdlali ogqwesileyo kwaye ude wabekwa kwinqanaba lekhulu leenkwenkwezi ezibonisa isini kwishishini lemuvi.
10) UPeter Dinklage
UPeter Dinklage - Wazalwa ngomhla we-11 kuJuni ngo-1969
UPeter Hayden Dinklage ngumdlali weqonga waseMelika kunye nomvelisi wefilimu. UDinklage wafumana umboniso bhanyabhanya wakhe wokuqala othi Living in Oblivion ngo-1995 kwaye uye wavela kwi-Elf kunye ne-Chronicles yaseNarnia: Prince Caspian. Kutshanje uDinklage ubonise indima kaTyrion Lannister kuthotho olushisa izikhotha ethi Game of Thrones.